ISt. Vincent kunye neGrenadines zibiza iiCaribbean ukuba ziqalise ngokuphumeza uRhulumente we-21st Century
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba zeShishini lokuhlangana » ISt. Vincent kunye neGrenadines zibiza iiCaribbean ukuba ziqalise ngokuphumeza uRhulumente we-21st Century
Iindaba zeManyano • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • inkcubeko • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zeShishini lokuhlangana • iintlanganiso • iindaba • abantu • ISaint Vincent kunye neGrenadines Breaking News • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo
URhulumente waseSt. Vincent naseGrenadines, ebambisene noManyano lwezoNxibelelwano lweCaribbean, babambe iVeki yeICT - iSt. Vincent kunye neGrenadines ukusukela ngomhla we-19 ukuya kowama-23 kweyoKwindla ngowama-2018 e-Beachcombers Hotel eSt. Vincent. Le Veki ibinomxholo wayo kaRhulumente wenkulungwane yama-21.
IiCaribbean zisasokola ukufikelela kwindlela eya kuRhulumente wama-21st Century okt abemi beziko, urhulumente ongenamthungo oxhotyiswe ngolwazi kunye netekhnoloji yonxibelelwano (ICT). Ngelixa amanye amazwe esebenzise ngempumelelo i-e-Government kwaye ngenene ngoku baphucula iimodeli zabo ezamkelweyo nangaphambi kokusa kwe-21st Century, uninzi lweCaribbean lusacinga ukutshintshela kwiinkonzo zorhulumente.
Xa ijongwa njengendibaniselwano, uninzi loorhulumente bengingqi bayaqhubeka nokusebenza kwii-silos ngaphakathi kubaphathiswa abathile, nakwilizwe liphela. Ukufumana umhlaba kunye nokukhuphisana kwihlabathi liphela, iiCaribbean kufuneka zisebenze, hayi njengamazwe ngamanye, kodwa njengangaphambili. Nangona amazwe amaninzi kulo mmandla ekumanqanaba ahlukeneyo enkqubela phambili kwezobuchwephesha, kuninzi okunokwenziwa ukufumana isisombululo kwimiba esihluphayo kunye nokuxhasana ngokuzimisela ekuphumezeni iinkonzo ze-e-Government ezilungelelanisiweyo.
Ngexesha lentetho yakhe ephambili kwiNtlanganiso yeBhunga lesiGqeba lama-36, uMhlonishwa. UCamillo Gonzalves, uMphathiswa wezeziMali, uCwangciso lwezoQoqosho, uPhuhliso oluZinzileyo kunye neTekhnoloji yoLwazi, iSt. Vincent kunye neGrenadines, ugxininise ukuba le ntlanganiso liqonga lokwenza iqhinga lommandla eliya kuthi lenze lo mmandla ufikelele kwinqanaba likaRhulumente we-21st Century.
Uye wathi, “Umgaqo-nkqubo onokusebenziseka, osebenzayo, osebenzayo nosulungekileyo onokubopha yonke imizamo yethu kunye nokusisa phambili kubaluleke kakhulu. Le ntlanganiso, iza kwizithende zeNgqungquthela yamva nje eAntigua naseBarbuda, apho iNkulumbuso uKeith Mitchell waseGrenada wabeka umbono wemiboniso ye-ICT kunye nolawulo kwaye eza kunyaka emva kwesibhengezo seCARICOM kwiNdawo eNye ye-ICT, kufanele ukuba intlanganiso yamandongomane kunye neebholithi apho singenzi owona mbono mkhulu usebenza, osele wenziwe, kodwa apho sibeka khona ulwakhiwo malunga nalo mbono kwaye masibone ukuba singaya njani phambili. ”
Ehambisa intetho yakhe yokuvula egameni lika-Nobhala Jikelele uBernadette Lewis, Mnu Nigel Cassimire, Ag. Unobhala Jikelele weCaribbean Union Telecommunication Union, ubonise, “Ngo-2018, ugxininiso lweCTU luRhulumente wekhulu lama-21 oluqhutywa bubuchwephesha bolwazi nonxibelelwano (ICT). I-teknoloji iya kuququzelela ukuphinda kwenziwe iinkqubo zikaRhulumente kunye neenkqubo esele zikho kangangeminyaka emininzi. Ngenxa yobuchwephesha obusenza ukuba sikwenze kule mihla, lixesha lokuba silibambe ithuba lokwenza iinkonzo zikarhulumente wethu zibe ngabemi ngakumbi kwaye zingabinamthungo kwaye zingasebenzi kwii-silos. ”
Kwiphulo lokukhawulezisa ukuphunyezwa kweenkonzo zikaRhulumente wenkulungwane yama-21, iWorkshop kaRhulumente yeNkulungwane yama-21, enye yezinto ezenzekileyo ngeveki ye-ICT, yenzelwe ukuphonononga umgaqo-nkqubo kunye nesakhelo sokucwangcisa kunye nokuvavanya imeko yangoku yorhulumente wedijithali eSt. Vincent kunye neGrenadines.
Bekhokelwa nguMcebisi we-ICT we-CTU, uGary Kalloo, kunye noErnst kunye noMlawuli oLawulayo oMncinci kunye neNkokeli yeCaribbean, uRhulumente kunye neCandelo loLuntu, uDevindra Ramnarine, le Workshop esebenzisanayo, efundisayo nefundisayo ijongene nemiba emihlanu ebalulekileyo: ukudala imeko evumayo, ukwakha iziseko zophuhliso imbonakalo yomhlaba, ukhusela ikamva kunye nokuxhasa ngemali umbono. Idatha yemeko yala macandelo mahlanu ifunyenwe lulwazi oluqokelelwe kwiphepha lemibuzo ebelihanjisiwe ngaphambili kubuchwephesha kunye nabameli bakarhulumente eSt. Vincent naseGrenadines. Ucweyo lusebenze ukungqinisisa olu lwazi ngokubhekisele kwimbono yabathathi-nxaxheba kumasifundisane ukuze kuchongwe izikhewu kwezi ndawo kwaye kunikwe uvavanyo imeko yangoku yoRhulumente we-21st Century ekuhlaleni.